बीमा कम्पनीहरुको शाखाको बिजोग छ अवस्था – Insurance Khabar
बीमा कम्पनीहरुको शाखाको बिजोग छ अवस्था
प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७५, बिहीबार ११:४१
बीमा कम्पनीहरुले सञ्चालन गरेका शाखा कार्यलयहरु बिजोग अवस्थामा छन् । कम्पनीहरुले आफुखुशी शाखा कार्यलय खोल्ने र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नगर्ने हुँदा कार्यलयको अवस्था दयनिय भएको हो ।
बीमा समितिको हालको व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले आफुले अध्ययन गरेको आधारमा शाखा कार्यलय खोल्न पाउँछन् । कम्पनीले अध्ययन गरेर समितिमा निवेदन दिएपछि समितिले सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्छ । तर, शाखा कार्यलयको भौतिक पूर्वाधारको बिषयमा कुनै पनि नीति नियम नहुँदा कम्पनीहरुले जथाभावी शाखा सञ्चालन गरेको बीमकहरु नै बताउँछन् ।
एक बीमा कम्पनीका कर्मचारी अनुसार प्रतिस्पर्धाको लागी एउटा कम्पनीले शाखा खोलेको ठाउँमा अर्को कम्पनीले पनि शाखा खोल्छ । तर, कार्यलयमा न्यूनत्तम भौतिक पूर्वाधार समेत नहुने गरेको उनले बताए । यहाँसम्मकी कतिपय कार्यलय कर्मचारी नभएर अभिकर्ताले नै चलाउँने गरेको उनले बताए ।
कम्पनीले मानिसको सुरक्षाको बिषयमा कुरा गर्छन् । तर, कम्पनीको कार्यलयको अवस्थामा देखेर विमितहरुले विश्वास गर्न कठिन हुने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘कार्यलय कुनै पनि समान छैनन, न त दैनिक कर्मचारी बसेर कार्यलय खोल्छन् । अनि विमितले कसरी विश्वास गर्छन् त,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्रालये संसदमा प्रस्तुत गरेको नयाँ विद्येयकमा पनि समितिको पूर्व स्वीकृति लिएर बिमा कम्पनीले स्वदेशमा तथा विदेशमा पनि कार्यलय खोल्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार ३६ वटा कम्पनीको १ हजार ९ सय ४७ शाखा स्थापना भएका छन् । नयाँ कम्पनीहरु थपिएसँगै शाखा कार्यलयहरु पनि थपिने तयारीमा छन् ।
ज्योति विकास बैंकले ल्यायो नयाँ बचत खाता, मेरो शेयर तथा डिम्याट नि:शुल्क
बीमालेख बोनशमा बीमा समितिको कैंची, समर्पण मूल्यमा वार्षिक होइन मासिक बोनश गणना
एनएमबि बैंकले ल्यायो नयाँ बचत योजना, यस्ता छन् विषेशता
२ हजार ५६८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १८ जनाको मृत्यु
सन नेपाल लाइफको नयाँ जीवन बीमा योजना सार्वजनिक, २.५ गुणासम्म दाबी भुक्तानी पाइने
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले साउन २० गतेबाट आइपीओ निष्काशन गर्ने, कति कित्ता दिने आवेदन ?
नेप्सेको इतिहासमा जीवन विकासको सर्वाधिक मूल्यमा कारोबार सुरु
रिलायन्स लाइफले दियो सर्जन विकको परिवारलाई साढे दुई करोड रुपैयाँको मृत्यु दाबी भुक्तानी
मैलुङ खोला जलविद्युतको आइपीओ विक्री खुला, कति कित्ता दिने आवेदन ?
सिइओ सावहरुले एक दुई जना कर्मचारीबाटै कम्पनी सञ्चालन गर्न खोज्नु भयो : अध्यक्ष सिलवाल
यूनियन लाइफको आइपीओ शेयरधनीको डिम्याट खातामा जम्मा, कतिमा होला पहिलो कारोवार ?
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी बन्द, सिइओहरुले बीमा समितिमा बुझाए संयुक्त हस्ताक्षर सहितको पत्र
९ कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट